Home » Featured » NAB TORIO NY FAMPANDROSOANA NY FAMPANDROSOANA NY FAMPANDROSOANA TANJONA ASA TOAMASINA SY FAMPANDROSOANA
Ny Fikambanana Nasionalin'ny Fampielezam-peo dia manaiky ny tolo-kevitra ara-teknika ho an'ny Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fampielezam-peo sy fampahalalam-baovao (BEITC) ao amin'ny 2019 Kat Show, natao ny April 6-11 tany Las Vegas.
Ny Fihaonamben'ny Fampielezampeo sy ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao dia natao hanentanana ny injeniera sy teknisiana, mpanentana fifanarahana, mpanamboatra fitaovana fampitaovana, mpaninjara, consultant injeniera, injeniera R & D, manam-pahaizana IT sy teknolojia mifandray amin'ny media. Ny fihaonambe dia manasongadina tatitra ara-teknika mifandraika amin'ny fahafaha-manararaotra sy ny fanamby manoloana ny fampitaovana teknolojia fampitaovana sy ny mpampita vaovao IT manerantany.
Kat Show mikatsaka ireo mpanolotra manana hevitra vaovao sy fomba fijery tsy manam-paharoa momba ny fironana haingana sy ny teknolojia mitarika ny ho avin'ny radio, fahitalavitra ary ny lohahevitry ny media momba ny teknolojia. Ny tolo-kevitra momba ny taratasy dia takiana amin'ny fampidirana ny fifantenana ny lohahevitra iray mahaliana voatanisa ao amin'ny 2019 BEITC Antsoy amin'ny taratasy.
Ny fanoloran-kevitra dia miankina amin'ny fanadihadiana ataon'ny mpiara-mianatra, ary ny taratasy ara-teknika manasongadina ny fikarohana tany am-boalohany na ireo mpandaha-teny tena ianteherana dia mandray fijery tsara indrindra. Ny soso-kevitra rehetra natolotra dia tokony aseho amin'ny endrika tutorial, tsy mamokatra. Ireo tolo-kevitr'ireo fampiroboroboana tsy miankina amin'ny vokatra orinasa na ny serivisy dia tsy ho ekena, na dia azo raisina aza ny tolo-kevitra manazava ny teknolojia fototra ampiasaina amin'ny vokatra na serivisy fampitaovana.
Ny fe-potoana ho an'ny tolotra taratasy dia ny Oct 26, 2018. Ireo mpanoratra mpanoratra voafantina hiditra amin'ny programa 2019 BEITC dia hampahafantarina amin'ny Novambra 2018. Tsindrio Eto ho fampahalalana fanampiny ary handefa tolo-kevitra.
About Kat Show
Kat Show, natao ny April 6 - 11, 2019, ao Las Vegas, NV, Etazonia, no fivondronana lehibe indrindra sy manerantany indrindra indrindra manerantany momba ny fampivondronana ny media, ny fialamboly ary ny teknolojia. Miaraka amin'ireo mpandray anjara 100,000 efa ho avy amin'ireo firenena 165 sy 1,700 + mpandray anjara, Kat Show dia tsena lehibe indrindra ho an'ny vahaolana izay mihoatra ny fampielezam-peo nentim-paharazana ary miteraka ny fitantanam-pitaterana nomerika. Manomboka amin'ny famoronana ho an'ny mpanjifa, amin'ny sehatra maro samihafa sy ny zom-pirenena tsy tambo isaina, Kat Show no toerana mpahita eran-nivory mba hitondra afa-po amin'ny fiainana amin'ny fomba vaovao sy mahafinaritra.
2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine fampitana injeniera fampitana Engineering Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana Kat 2015 Kat 2016 Kat Show Kat Show 2016 Kat fampisehoana Careers Las Vegas Kat Show Kat Show Registration NAB16 nabshow National Association ny ireo fahitalavitra Show Post Production World	2018-10-30
Next: VIDEO TONGA TONGA HO AN'NY AMBATONDRAZAKA VOALOHANY ANY AMBONY